နမ့်စန်မြို့နယ် ခိုလမ်ရှိ အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က လယ်သမား 47 ဦး ကိုစစ်ဌာနချုပ် အနီးတပ်သိမ်း မြေပေါ် ကျူးကျော်ဟု စွပ်စွဲခံရ - ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် (SHRF)
နမ့်စန်မြို့နယ် ခိုလမ်ရှိ အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က လယ်သမား 47 ဦး ကိုစစ်ဌာနချုပ် အနီးတပ်သိမ်း မြေပေါ် ကျူးကျော်ဟု စွပ်စွဲခံရ
2020 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 22 ရက်
လယ်သမား 47 ဦး တို့သည် မိမိတို့ပိုင်သိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာမြေများ ကျူးကျော်သည်ဟု နမ့်စန်မြို့နယ် ခိုလမ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိ အစိုးရတပ်က စွပ်စွဲလိုက်ပါသည်။
တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ-447 အရ လယ်သမား 47-ဦးအား အစိုးရတပ် ခလရ-66 က မြေယာဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကျူးကျော်ခြင်းရာဇဝတ် ပြစ်မှုဖြင့်စွပ်စွဲလိုက်သည်။ ယင်းအသိမ်းခံမြေယာများသည် ၎င်းတို့ ခလရ-66 တပ်ရင်းနှင့်တဆက်တည်း ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ဇွန်လ 9, 2020 ရက်‌နေ့တွင် နမ့်စန်မြို့နယ်တရားရုံးမှ စီရင်ချက်များ ကြားနာရန် လယ်သမား 47-ဦးအားဆင့် ခေါ်ပြီး၊ ဇွန်လ 18, 24, 29 နှင့် ဇူလိုင် 10 ရက်နေ့များတွင် တရားရုံးသို့ လာရောက်ရန်ဆင့်ဆိုလိုက်သည်။
လယ်သမားများမှာ ခိုလမ်မြို့ ရပ်ကွက် 1, ရပ်ကွက် 2, ရပ်ကွက်3နှင့် ရပ်ကွက်6တို့တွင်နေထိုင်သူများ ဖြစ် ကြသည်။ ခိုလမ်မြို့၏ အရှေ့ဘက် ဧကပေါင်း 400 ကျော်ခန့်ရှိ မြေယာ ပေါ်တွင်ပြောင်း၊ စပါး၊ နှမ်း၊ မြေပဲ အစ ရှိသည့် စီးပွါးဖြစ် သီးနှံများသည် နှစ်စဥ် မြန်မာကျပ်ငွေသိန်း (20) ခန့်ဝင်ငွေရရှိစေပါသည်။ ၎င်းမြေယာကို အ သုံးမပြုနိုင်ရန်အစိုးရတပ်က 2019 ဩဂုတ်လ ကတည်းက သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထားပြီး တပ်သားများ ကို လည်းစောင့်ကြပ်စေခဲ့သည်။
ခိုလမ်မြို့နယ်တဝိုက်တပ်ပိုင်မြေအဖြစ်သိမ်း ဆည်းမြေများသည် 1996 – 1998 ခုနှစ်အ တွင်း က စဖြစ်ပြီးအစိုးရ စစ်တပ်က ရှမ်းပြည် အလယ် ပိုင်းနှင့်တောင်းပိုင်းဒေသများတွင် တည်ရှိသည့် ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင် ရေးကောင်စီ- ရှမ်း ပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) တပ်သစ်အား ခြေမှုန်းရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖေါ် ဆောင်နေချိန်ဖြစ်သည်။ နမ့်စန်မြို့အရှေ့ ဘက် ခြမ်း‌ဒေသတွင် နေထိုင်သူအားလုံးကို အတင်း အဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်း စေခဲ့ပြီး၊ လူပေါင်း 40,000 ခန့်မှာနေရပ်စွန့်ခွါခဲ့ရပြီး ကားလမ်းနှင့်နီးရာ ခိုလမ် အပါအဝင်နှစ်နေရာတွင် ပြန်လည်နေရာ ချ ထားခြင်းခံရသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရွာသားများသည် ခိုလမ်မြို့နယ်တဝိုက်တွင် ညစ်ပတ်သော ယာယီ တဲ များထဲတွင် စုပြုံနေထိုင်ရပြီး အမြားအပြား သည် ကူးစက်ရောဂါ၊ အငတ်ဘေး နှင့် ကိုယ့် အိမ်ကို စား နှပ်ရိက္ခာ ပြန်ယူ ရန်ကြိုး စားစဥ် အစိုးရတပ်သားများ လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးကုန်ကြသည်။ အများ စုမှာ ၎င်းတို့ ဝမ်းစာအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးကြပြီး ယခုချိန်ထိအိမ်မပြန်နိုင်ကြသေးသည် ဒုက္ခသည် များရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ အစိုးရတပ်က ခိုလမ်မြို့နယ်အတွင်း တပ်စခန်းများ တည်ဆောက်ရန် တပ်ပိုင်မြေအဖြစ် မြေယာ ဧကထောင်ပေါင်းများစွာ သိမ်းယူထားသည်။ ခိုလမ်သည် တခြားသော ဒေသများသို့ ဆက်သွယ်ထား တာ ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အချက်အချာ မဟာဗျူဟာကျလှသည်။ 2010 ခုတွင်တည်ထောင်သည့် ခိုလမ် – အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ဌာချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ 14-ခုမြောက် အသစ်တည်ထောင်လိုက်သည့် စစ်ဌာန ချုပ်ဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တွင် 4-ခုမြောက်ဖြစ်သည်။ ခိုလမ်စစ်ဌာနချုပ်သည် တပ်ရင်း 26 ခုကို ကွပ်ကဲရပြီး၊ နှစ် 20 ခန့်က ရှမ်းပြည်သူလူထုများ စွန့်ခွါသွားသည့် သဘာဝသယံဇာတ ကြွယ်ဝသည့် ရှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်းဒေသများကို သိမ်း၍ စီမံကွပ်ကဲရန် တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည်။
အစိုးရတပ်နှင့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တို့ကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်အရ လက်ရှိတွင် တရားဝင်လျက်ရှိစေကာမူ ခိုလမ်-အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ဌာချုပ်သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ ကို အစဥ်တစိုက် ရန်မူနေခဲ့သည်၊ RCSS/SSA တပ်စခန်းများ တိုက်ခိုက်ခြင်း နှင့် ထိုင်း-ရှမ်းနယ်စပ်ဒေသရှိ IDP ဒုက္ခသည်စခန်းများကိုလည်း ပစ်ခတ်မှုများလုပ်နေခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဥ် များကို လည်း ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ဟန့်တားလျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် RCSS/SSA က စီစဥ်ပေးသည့် ပြည်သူလူထု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ခရီးစဥ်များ ဟန့်တားခြင်း၊ ကျေးရွာများ အတွက် ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ပညာပေးအစီအစဥ်များ နှောက်ယှက်ခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။
ဤနောက်ဆုံး ဖြစ်ရပ်သည် စစ်တပ်တိုးချဲ့ရန်အတွက်တိုင်းရင်းသားတို့၏ မြေယာများအား သိမ်းပိုက်ခြင်း သည် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဥ်အပေါ်အစိုးရစစ်တပ်ကအစဥ်တစိုက်ကလိမ်ကကျစ်ထပ်မံပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသ ခံ ပြည်သူလူထု တို့၏ အခွင့်အရေးများ ကိုလည်းထပ်မံချိုးဖေါက်ရာကျသည်။
အစိုးရတပ်များထပ်တိုးတည်ဆောက်နေခြင်း နှင့် နိုင်ငံနှင့်တဝှမ်းမြေယာများ သိမ်းယူနေခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်သည်။ ခိုလမ်မြို့နယ်မှ လယ်သမားများအား တရားမျှတမှု မရှိ စွပ်စွဲချက်များ ချက်ချင်း ပယ်ဖျက်ပေးရန်နှင့်တစုံတရာချိန်းချောက်ခြင်းမျိုး အနှောက်အယှက်ပေးခြင်းမျိုး မရှိစေဘဲ၎င်းမြေယာ၌ လည်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။
ခိုလမ်မြို့လယ်သမား 47 ဦးအား စွဲချက်အသေးစိတ်
အစိုးရတပ်မှ လယ်သမားများအား စွဲချက်တင်ရန် ချိန်းခြောက်မှုသည် 2019 ဩဂုတ်လတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ဩဂုတ်လ 12-ရက် 2019 နေ့တွင် ဗိုလ်ဉာဏ်လင်းထွန်း ဆိုသူတပ်ရင်း 66 မှ အရာရှိတဦးသည် လယ်သမား များအား နမ့်စန်မြို့တွင်ရုံးစိုက်ထားသည့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး (ထွေအုပ်)သို့ ရောက်လာရန် ဆင့်ခေါ်ခဲ့ သည်။ ၎င်းတို့သည် တပ်ပိုင်မြေယာများ အသုံးပြုကြောင်း အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော စာရွက်ပေါ်တွင် လက် မှတ်ရေးထိုးစေသည်။ ၎င်းတို့ပိုင်မြေယာများလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အတွက်လယ်သမားများကလည်း လက် မှတ်ရေးထိုးရန်ငြင်းဆန်ကြသည်။ လယ်သမား နှစ်ယောက်မှာ ပုံစံ ၁၀၅ မြေယာဥပဒေ ဆိုင်ရာစာ ရွက်စာ တမ်း ရှိပါလျက်စစ်တပ်ကလက်မခံပါ။
မကြာမီ 2019 ဩဂုတ်လအတွင်း ၎င်းမြေယာများသည် တပ်ပိုင်မြေဖြစ်ကြောင်း အစိုးရတပ်က ဆိုင်းဘုတ် စိုက် ထူပါတော့သည်။
လယ်သမားများအား နမ့်စန်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး (ထွေအုပ်)သို့လည်း အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဆင့်ခေါ်ပြီး ယင်းအငြင်းပွါးလျက်ရှိ မြေယာများသည် တပ်ပိုင်မြေ ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုးစေသည်။ စက် တင်ဘာ 23-ရက်နေ့တွင် ၁-ကြိမ်၊ အောက်တိုဘာ 27-ရက်နေ့တွင် ၁-ကြိမ်၊ ဒီဇင်ဘာ 17-ရက်နေ့တွင် ၁-ကြိမ် အသီး သီးဆင့်ခေါ်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လယ်သမားများက လက်မှတ်ထိုးရန် ငြင်းဆန်လျက် ယင်း၏ မြေယာပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 20, 2019 ရက်နေ့တွင်လယ်သမား ၇-ဦးအား ခိုလမ် ရဲစခန်းသို့ ဆင့်ခေါ်ပြီးတပ်က ၎င်းတို့ကို တရား စွဲဆိုကြောင်း အကြောင်းကြားသည်။ ဆက်လက်၍ နောက်နေ့များတွင် ကျန်နေသေးသော လယ်သမား များ ၁၀- ယောက် တအုပ်စုဖွဲ့ကာ ခိုလမ် ရဲစခန်းသို့ လာရောက်စေပြီး ၎င်းတို့ကိုတရားစွဲဆိုကြောင်း အလားတူ အကြောင်းကြားသည်။
လယ်သမားများလည်း ၎င်းတို့စိုက်ပျိုးလျက်ရှိ မြေပေါ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မြဲ လုပ်ကိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 28, 2019 နှင့် မတ်လ 10, 2020 ရက်နေ့တွင် ၎င်းမြေယာသည် တပ်ပိုင် မြေဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်က ဆိုင်းဘုတ် များပိုမိုစိုက်ထူလာ သည်။ စိုက်ပျိုးခင်းဆီသို့လည်း စစ်သားများစေလွတ်ကာ သီး နှံများ မစိုက်ကြရန်သတိပေး သည်။
သို့သော်လည်း လယ်သမားများက ၎င်းမြေယာပေါ်တွင် စိုက် ပျိုးရေးများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။
ဇွန်လ 9, 2020 ရက်၊ နောက်ဆုံးဖြစ်စဥ်တွင် နမ့်စန်မြို့နယ် တရားရုံးက လယ်သမား 47-ဦးအား ဆင့်ခေါ်ပြီး၊ တရားစီရင်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ 447 ဖြင့် စစ်တပ်ပိုင်မြေယာအား ကျူးကျော်ကြောင်း စွဲချက်ဖြင့် တပ်ရင်း-66 က ၎င်းတို့ကို စွဲဆိုလိုက်ကြောင်း အကြောင်းကြားသည်။ လယ် သမားများအား အချို့သောရပ်ရွာလူကြီးများ၏ အာမခံချက်ကြောင့်မည်သူမျှအဖမ်းမခံကြရပါ။ သို့သော် လည်း ပဲ မကြာခဏ ဆိုသလိုနမ့်စန်မြို့ နယ်တရားရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် အကြောင်းကြားရသည်။ ယခု နောက်ဆုံး သတင်းပေးပို့ချက်အရ ဇွန်လ 18-ရက်၊ ဇွန်လ 24-ရက်၊ ဇူလိုင် 10-ရက်နေ့များတွင်အစီရင်ခံရသည်။ ခိုလမ်မှ နမ့်စန်မြို့နယ်တရားရုံးသို့ အစီရင်ခံရန် တကြိမ်သွားလျင် ၁-ရက် အချိန်ပေး/အချိန်ဖြုန်းရပြီး ခိုလမ် မှထရပ်ကားဖြင့်ဆိုလျင် ၁-နာရီခန့် ကြာသည်။
လယ်သမားများလည်း၎င်းတို့မြေယာများ မဆုံးရှုံးစေရန် နှင့် ရှေ့ဆက်တရားရင်ဆိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာဖွေ လျက် ရှိသည်။
တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည့် လယ်သမားများ စာရင်း
စဥ် လယ်သမားအမည် မြေယာအကျယ်အဝန်း (ဧက) နေရပ်လိပ်စာ (ခိုလမ်မြို့)
1. ဦးလုကြည်5ရပ်ကွက် ၁
2. ဦးကြာစေး7ရပ်ကွက် ၁
3. ဦးမာတိ4ရပ်ကွက် ၁
4. ‌ဒေါ်နာပိန်း7ရပ်ကွက် ၁
5. ဒေါ်နာဝ7ရပ်ကွက် ၁
6. ဦးကြာတား3ရပ်ကွက် ၁
7. ဦးတော 20 ရပ်ကွက် ၁
8. ဦးကျောမော့6ရပ်ကွက် ၁
9. ဦးလုကာ5ရပ်ကွက် ၁
10. ဦးဂျိုးဇက်6ရပ်ကွက် ၁
11. ဦးကျော့ဖေ7ရပ်ကွက် ၁
12. ဒေါ်ဗူးတီ 10 ရပ်ကွက် ၁
13. ဦးလှိုင်မြင့်ဦး 18 ရပ်ကွက် ၁
14. ဦးလုံးထွန်း 3.84 ရပ်ကွက် ၂
15. ဦးအောနန္တိ 2.56 ရပ်ကွက် ၂
16. ဦးလုံးပန်တိ 16.64 ရပ်ကွက် ၂
17. ဦးလုံးစံ 5.12 ရပ်ကွက် ၂
18. ဦးပေတိ 7.68 ရပ်ကွက် ၂
19. ဦးလုံးအောင် 7.68 ရပ်ကွက် ၂
20. ဦးအိုက်စော 6.4 ရပ်ကွက် ၃
21. ဦးဝါလိန် 12.8 ရပ်ကွက် ၃
22. ဦးအိုက်လှ 10 ရပ်ကွက် ၃
23. ဦးယာလိန် 18 ရပ်ကွက် ၃
24. ဦးအောင်ထွန်း 8.96 ရပ်ကွက် ၃
25. ဦးစိုင်းပညာ 19.20 ရပ်ကွက် ၃
26. ဦးနန္တ5ရပ်ကွက် ၃
27. ဦးစိုင်းမောင် 19.20 ရပ်ကွက် ၃
28. ဦးစိုင်းပီး 12.80 ရပ်ကွက် ၃
29. ဦးလုံးမူလ 7.68 ရပ်ကွက် ၃
30. ဒေါ်နန်းလူ 3.84 ရပ်ကွက် ၃
31. ဒေါ်ပါခမ်း 7.68 ရပ်ကွက် ၃
32. ဒေါ်လှလှရီ 5.12 ရပ်ကွက် ၃
33. ဒေါ်မယ်ထောက်ခမ်း3ရပ်ကွက် ၃
34. ဦးစိုင်းညွန့် 10.24 ရပ်ကွက် ၃
35. ဦးနာနီး 25 ရပ်ကွက် ၃
36. ဦးမိုးစက် 10 ရပ်ကွက် ၃
37. ဦးဘေးလေ 15 ရပ်ကွက် ၃
38. ဦးလုံးတိယ4ရပ်ကွက် ၃
39. ဦးဘာဆား7ရပ်ကွက် ၃
40. ဦးနန္တ 11.52 ရပ်ကွက် ၃
41. ဦးကြည်ဆောင် 5.12 ရပ်ကွက် ၃
42. ဦးရန်ချိန် 10.24 ရပ်ကွက် ၃
43. ဦးရိုရှန်း 14 ရပ်ကွက် ၃
44. ဦးအောင်ခမ်း 5.12 ရပ်ကွက် ၃
45. ဦးစိုင်းစိန္တာ 1.28 ရပ်ကွက် ၃
46. ဦးလုံးအော 2.56 ရပ်ကွက် ၃
47. ဦးလုယူကွမ်း 10.24 ရပ်ကွက် ၆